ခက်သီ | MoeMaKa Burmese News & Media
>All Quiet again in the Myawddy Front
>Min Kaung Chit - Article
Posts Tagged ‘ ခက်သီ ’
ခက်သီ ● ချစ်ခြင်းရဲ့ ဒုတိယစာမျက်နှာ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၉ တရားက တရား ဓားကဓားပဲ တရားမပါရင် ဓားလည်း မကိုင်သင့်။ ပညာရေးဟာ ဗဟုသုတ သက်သက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ ကိုယ်ကျင်တရားကို မွေးမြူလေ့ကျင်ပေးရာနေရာတဲ့...
ခက်သီ ● ကဗျာနဲ့ ဝေးဝေးတနေရာ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ ရောင်းရမှ ပန်းချီတဲ့ လေထုကို သားလှီးဓားနဲ့ဖြတ် ရက်စက်တဲ့အမှန်တရားဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မသနားတတ်ဘူး။ ကဗျာဟာ တိတ်တဆိတ်လူသတ်သမား ကဗျာဟာ ကဗျာဆရာကိုသတ်ပြီး...
ခက်သီ ● တပါးသောအရပ်က မိုးတွေ
ခက်သီ ● တပါးသောအရပ်က မိုးတွေ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၆၊ ၂၀၁၈ မိုးတိမ်တွေ ပြေးနေရင်းသံခွာကျွတ်တယ် မုန်သုန်က ဆားနည်းနည်းပေါ့တယ်။ မိုးရေတွေက ပြည်တွင်းဖြစ်မဟုတ်ဘူး တောင်ကတုံးကို သျှောင်ထုံးလို့မရတော့ဘူး ဂျယ်လီဘူးခွံတွေလို ရွှေတွင်းတွေ။ ကောင်ကင်ကကြည့်တော့...
ခက်သီ ● ပရိုမိုးရှင်းကာလ (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၈ စစ်ပွဲတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပေးနေကြတယ် မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေက မေတ္တာဝါဒကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပေးနေကြတယ် ခရိုနီတွေက ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပေးနေကြတယ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ မိန်းမသားတယောက်ကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပေးနေသလိုပဲ...
ခက်သီ ● တန်ဆောင်တိုင် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ မီးပုံးပျံလည်း မှိုင်းဝရင် တက်မှာပဲ မယ်ဇလီဖူးလည်း ကံစွပ်ရင် ဆေးပေါင်းခမှာပဲ။ အချက်အလက်တွေရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ နှလုံးသားကို ထွင်းဖောက်ခိုးယူလို့ရနိုင်မလား။ သိမှုဟာ ဆပ်ပြာခဲများလား စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေမှုတွေဟာ...
ခက်သီ ● ဖြေရှင်းမပေးဘူး ဖြိုခွဲပစ်လိုက်ပြီ (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၇၊ ၂၀၁၇ အိပ်ချင်မူးတူး သိကြားရုပ်မှတ်လို့ဆွဲတာ ဘီလူးရုပ်ထွက်လာတယ် ဖြေရှင်းမပေးဘူး ဖြိုခွဲပစ်လိုက်ပြီ။ ကျားစွယ်ကို သွားတိုက်ဖို့ ကျားလျာကို ဓာတ်ခွဲဖို့ ကျားခံတွင်းကို ခေါင်းထိုးဝင်ပေးရမှာလား...
ခက်သီ ● ကြောက်နေ လန့်နေ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၁၇ ဖြတ်သွားတဲ့ကားတွေကို ငေးငေးနေ ဝရန်တာဆီ ထွတ်ထွတ်ရပ်မိ နားထဲမှာ မော်တော်ဘုတ်သံ မျက်နှာကြက်ကို မော်ကြည့်ရင်းောကာက်နေလန့်နေ ဆိုက်ဗေးရီးယားကထွက်ပြေးလာတဲ့ စတာလင်ရဲ့အကျဉ်းသား...
ခက်သီ ● ခေတ်သစ် ငဘများသို့ ….
ခက်သီ ● ခေတ်သစ် ငဘများသို့ …. (မိုးမခ) မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ လက်ဝါးကြီးအုပ် ခရိုနီစီးပွားရေးဟာ အသက်ဝင်နေတုန်း သနားစရာအကောင်းဆုံးက တောင်သူတွေ သီးနှံပေါ်ပြီဆို ဈေးတွေ ထိုးကျပြီ တောင်သူလက်ထဲ သီးနှံမရှိတော့ဘူးဆို...
ခက်သီ – အခွံမာသီး
artist – Than Htay Maung ခက်သီ – အခွံမာသီး (မိုးမခ) မတ် ၃၊ ၂၀၁၇ နေရောင်က ဖွဲဖွဲလေးရယ် နေ့တွေက ကြောင်တောင်ကန်း သွားပိုးစားနေရှာသူ လမ်းမထက် လူနဲ့လူချင်း...
ခက်သီ – အခါတပါး၌
Photo – YIT ခက်သီ – အခါတပါး၌ (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၇ ခွေးကတက်ဟာ ရွှေနန်းတော်လား ရူးမိုက်မှားစွာ ခမ်းနားဖူးခဲ့။ အခါတပါး၌ ငါကိုယ်၌က ငါ့အား...
ခက်သီ ● ကျနော်ဆက်၍ မဖတ်ချင်သော ဝတ္ထု (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇ ဆင်ဖမ်းတဲ့မောင်ရွှေဝါ မြွေမဖမ်းကောင်းဘူး။ ဒရမ်စတစ်ဟာ ကွန်တိုမြေပုံပေါ် ထောက်လို့။ ရှားပါးသစ်ခွမျိုးစိတ်ဟာ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် မျက်စိလည်တယ်။ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း...
ခက်သီ ● ပြည်တွင်းစစ် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆ စစ်က သူ့အလိုအတိုင်းဖြစ်လို့မှမရတာ ကျောက်စိမ်းကလည်း ဆတ်ကော့လတ်ကော့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကလည်း မူတူတူ ကျွန်းသစ်နဲ့ မြစ်ဆုံကလည်း ညုတုတု တောင်တန်းနဲ့ ပင်လယ်တွေက ဖြားယောင်းနေတော့...
ခက်သီ ● ခပ်လှမ်းလှမ်းက သံလွင်ခက် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၆ ကျောက်ခေတ် ကြေးခေတ် သံခေတ်ကနေစပြီး အချစ်နဲ့ ရှေးမနှောင်းပဲ စစ်ဟာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ် ။ ဘုရားသခင်ရှိရင် စာတန်ရှိတယ် စစ်ကြောင့်...
ခက်သီ – ဘုရားသခင်အတွက် မေးခွန်း
Than Htay Maung ခက်သီ – ဘုရားသခင်အတွက် မေးခွန်း (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၆ လမ်းတိုင်းဟာ ရောမကိုရောက်နိုင်ပေမယ့် ရောမ ကနေ ရောက်နိုင်တာတလမ်းပဲရှိတယ် အဲ့ဒါဟာ ငရဲပဲ ဆီဇာဟာ...
ခက်သီ ● ခြေမကိုင် မိ၊ လက်မကိုင် မိ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၆ မီးဖိုထဲ ဝင်တယ် ပြန်ထွက်လာတယ် ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်တယ် မျက်နှာသစ်ပစ်မိတယ် ပြန်ထွက်လာတယ်...
ခက်သီ – လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဂျော်နီ
ခက်သီ – လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဂျော်နီ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၆ နေရောင်ခြည်ဟာ ၅ မိနစ်ကြာမှ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရောက်တယ် လမ်းလျောက်နေတဲ့ ဂျော်နီကတော့ မုယောစပါးခင်းတွေ ဂျုံခင်းတွေ ဘာလီခင်းတွေ ဝက်သစ်ချပင်တွေအောက်ကနေ လျှောက်သွားတာ...
ခက်သီ – ဂူပြန်တော်ရဲ့ပြန်စာ
ခက်သီ – ဂူပြန်တော်ရဲ့ပြန်စာ (မိုးမခ) ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၆ ငရဲကို လက်ပစ်ကူးရင်း မောပမ်းလာတဲ့အခါ စပိဘုတ်ပေါ် တက်စီးမိတယ် အချောင်ခိုလိုစိတ်ဟာ ငရဲကို မြန်မြန်ပို့မယ်လို့ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ပေါင်တချက်ပုတ် ဖျတ်ခနဲ...
ခက်သီ ● နေရောင်ဟာ ဆတ်ပိုင်းကျိုးကျ ငါတေးသီနေတုန်း (မိုးမခ) မေ ၁၉၊ ၂၀၁၆ အိမ်တခုလုံး ကြွက်တွင်းတွေဖွာရာကျဲလို့ ကြွက်တွင်းတွေမှာ ကယ်ပေါက်ရှိတယ် ငါ့ဘ၀မှာ ကယ်ပေါက်မရှိတော့ ငါလည်း အိမ်ပြန်ရောက်ရတယ်။ ပြေးနေတဲ့ရထားပေါ်က ခုန်ချလုလု...
ခက်သီ – ခက်တာပဲ (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၈၊ ၂၀၁၆ လတ်တလော ဆဲလို့ကောင်းတဲ့အစိုးရဆင်းသွားပြီး ဆဲလို့မကောင်းတဲ့အစိုးရ တက်လာတယ်။ မပြောင်းတာကြာတော့ ပြောင်းတာကို လူတွေကြိုက်ကြတယ် နတ်ကတော်တွေတောင် မေမေနိုင်မှဖြစ်မှာပါနဲ့ နတ်ချော့ကြတယ်။ ထူးသလားဆိုတော့...